तपाईंको कपाल धुँदै - समुद्र तट वा पोखरी पछि तपाईंको रेखदेखको लागि चरणहरू बेजिया
कपाल धुनुहोस्एक दिन बीचमा वा पोखरीमा, यो यति सजिलो नहुन सक्छ। किनकि हामीलाई राम्ररी थाहा छ, घामले ठूलो विनाश निम्त्याउँछ, तर समुद्री पानी वा क्लोरीन पनि। यी सबै र अधिकका लागि, हामीसँग राम्रो कपाल हेरचाह कायम गर्न हातमा उत्तम सल्लाहहरू हुनु आवश्यक छ।
त्यसोभए, हामी पूर्ण रूपमा छौं छुट्टीको मौसम, त्यो राम्रो मौसमको आनन्द लिई, यो समयको बारेमा पत्ता लगाउने समय छ कि यो कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान राख्ने मनेको मजा लिन सक्षम हुनको लागि। त्यहाँ प्रभाव पार्ने धेरै कारकहरू छन्, तर आज हामी ती सबैलाई अन्त्य गर्न जाँदैछौं जुन हामीलाई उपयुक्त छैन र ती ती कार्यहरूको लागि अप्ट इन गर्दछ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
1 के म हरेक दिन शैम्पू प्रयोग गर्न सक्छु?
2 नुहाइन्छ वा धुलेको छ?
3 कपाल धुँदा सधैं न्यानो पानी
4 राम्रो स्क्याल्प मसाज
5 म कपाल कसरी सुकाउने?
के म हरेक दिन शैम्पू प्रयोग गर्न सक्छु?
यो सत्य हो कि त्यहाँ शैम्पू र यसको बारम्बार प्रयोगको बारेमा फरक सिद्धान्तहरू हुन्छन्। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, हामी हप्ताको हरेक दिन हाम्रो कपाल धोउन सक्छौं। तर यो सत्य हो कि हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कस्तो प्रकारको शैम्पू प्रयोग गर्ने। यस अवस्थामा, तपाइँ यसलाई हरेक दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर सम्झनुहोस् कि यो हल्का शैम्पू हुनुपर्दछ र हामीलाई भन्दछ कि यो प्रत्येक दिनको लागि हो शायद उपयोगी छ। यस प्रकारले हामी यसलाई धेरै हेरचाह गर्दैछौं। ग्रीष्म itतुमा यो आवश्यक भन्दा बढि सुख्खा हुन्छ, त्यसैले हामीलाई शैम्पू चाहिन्छ जुन यसलाई पुन: उत्पन्न गर्दछ र यसको चमक र सौन्दर्य कायम राख्न आवश्यक हाइड्रेशन प्रदान गर्दछ।
नुहाइन्छ वा धुलेको छ?
यो सत्य हो कि सूर्य जोखिम पछि, कपाल पहिले भन्दा बढि हाइड्रेसन चाहिन्छ। यदि हामीले सहि शैम्पू प्रयोग गर्‍यौं भने, नुहाउँदा हामीले टिप्पणी गरेका छौं। तर अर्कोतर्फ, यदि हामी केवल समुद्री किनारमा गयौं भने हामी अपवाद गर्न सक्छौं। आदर्श रूपमा, यदि तपाईं प row्क्तिमा धेरै दिन जानुहुन्छ भने, यसलाई शैम्पू र अर्कोबाट धोउने प्रयास गर्नुहोस्, मात्र यसलाई कुल्नुहोस् तर थप छैन। यो राम्रो तरीकाले यसलाई ध्यानमा राख्नु भए पनि यसलाई साकार नगरी पनि हो। तसर्थ, हामी समुद्रबाट आयोडिनको अवशेषहरू हटाउँदैछौं, तर कुनै सजाय बिना। तपाइँ प्रक्रियामा मद्दत गर्न मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर शैम्पू बिना नै हामीले उल्लेख गर्यौं।
कपाल धुँदा सधैं न्यानो पानी
यदि शैम्पू महत्त्वपूर्ण छ भने पानीको तापक्रम पछाडि हुँदैन। पछ्याउन हाम्रो कपालको ख्याल राख्दैहामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि धेरै तातो पानीले यसलाई अझ कमजोर बनाउँदछ, त्यसैले यो सुझाव दिइन्छ कि यो सँधै न्यानो र थोरै चिसो हुन्छ, तर यसलाई अधिक नबनाई। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ, न्यानो वा गुनगुना पानी पूर्ण रूपमा फोहोर हटाउने काममा जिम्मेवार हुन्छ, त्यसैले चिसोको अनुहारमा यो मुख्य हो।
राम्रो स्क्याल्प मसाज
जुन दिन हामीले शैम्पू लागू गर्नुपर्नेछ, हामी यसलाई राम्ररी गर्नेछौं। यसले हामीलाई भन्दछ कि हामीले यो राम्रो मालिशको मद्दतले गर्नुपर्छ। तर हो, धेरै दबाब बिना नै, किनभने हामी यसलाई सक्रिय गर्न सक्दछौं सिबेशियस ग्रन्थी। त्यसो भए यसको अर्थ केशको लागि बढी तेल हुनेछ र यो हामी चाहिदैन। हामी जे देख्छौं त्यसबाट यसको उचित मापनमा सबै आवश्यक हुन्छ। तपाईं सुन्दरतामा पनि एक निश्चित सन्तुलन हुनुपर्दछ!
म कपाल कसरी सुकाउने?
ड्रायर र धेरै तातो तापक्रम पनि कपाल र टाउकोको क्षति। त्यसकारण, हामी जहिले पनि तिनीहरूलाई अलग राख्छौं। खास गरी अब गर्मी मा जब तापक्रम यति माथि छ। तर यो सत्य हो कि कपालको लागि उत्तम चीज भनेको केशको क्षेत्रलाई हेयर ड्रायरको साथ थोरै सुकाउनु हो। यसलाई नजीक ल्याएर र न्यानो तापक्रमको साथ। हामी के हासिल गर्न चाहन्छौं सबै ओसलाई हटाउनु हो। त्यसो भए बाँकी कपाललाई सुख्खा बनाउन सकिन्छ। र के तपाईं यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » एक दिन पछि समुद्र किनार वा पोखरीमा तपाईंको कपाल कसरी धोउने
कृत्रिम स्वीटनर, प्राकृतिक स्वीटनरहरू र चिनी विकल्प सामान्य रूपमा। के लिने?